Abiy Ahmed oo Guul ka sheegtay dagaalka iyo magaalooyin uu dib uga qabsaday Jabhadda Tigray - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Abiy Ahmed oo Guul ka sheegtay dagaalka iyo magaalooyin uu dib uga qabsaday Jabhadda Tigray - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in ‘cadawgiisa laga adkaaday’, wuxuuna ballan qaaday in ay dib u qabsan doonaan dhulka gobolka Axmaarada oo ay gacanta ku hayaan ciidammada Tigreega.
Muuqaalo laga soo duubay furint hore ee dagaalkaa oo laga sii daayay Telefishinka Fana ee ay dowladda leedahay ayaa muujinaya Abiy oo xiran qalabka militariga, qeybna ka ah dagaalka ay ciidamada dowladda Itoobiya kula jiraan TPLF.
“Taliska Bari wuxuu gaaray guul aan la qiyaasi karin hal maalin oo qorshe ah iyo dagaal qaatay maalin iyo bar,” ayuu yiri Abiy oo intaa ku daray “Waan sii wadi doonnaa guulahaas aan ka gaarnay jiidda hore”
Degaanada ciidmada Itoobiya ay dib u qabsadeen ayaa kal aah: Shewa, Mezezo, Molale, Shewa Robit, Rasa iyo nawaaxigeeda, waxayn ila 220 KM u jiran magaalada Addis ababa.
Ciidamada Tigreega ayaa ku hanjabay inay gudaha u soo galayaan caasimadda Addis Ababa ama ay isku dayi doonaan inay jaraan marinka isku xira Itoobiya oo aan bad lahayn iyo dekedda ugu weyn gobolka; laakiin wixii markaas ka danbeeyay waxaa dagaalka ku biiray Abiy Ahmed.
Previous articleFarmaajo tours Qatar as election programme falls short
Next articleXOG: Midowga Musharixiinta oo Qarka u saaran inay xiriirka u jaraan Rooble iyo Labada tijaabo ee..